Obamaa fi biyya teenya. – Welcome to bilisummaa
Obamaa fi biyya teenya.
Presdenti Obamaan Magaalaa Finfinnee galuun isaa dhageyame jira .
Presdenti Obamaan daawwanna kanaan hoggattota ethiopia bulchaa jiran wiin kan wal mari’atu tahuun bekkame jira.
Akkasuma dhimmaa guddina ethiopia fi dimokraasi laalchise komi qabu hogganttota EPRDF waliin kakaasuf kan jiraatu tahuun bekkame jira.
Dhimma kana laalchisee Gorsitun Prsdenti Obamaa Sozaan Rais bulchinssi ethiopia bulchinsa dimokraasi akka hin tahin Obamaan qacelche beka jechu ibsite jirti.
Gara biraan Obamaan tokkommaa gola Afrikaatti hogganttota Afrikaa hunda qunname kan haasofsisu tahuun isaa bekkame jira.
Walgayi Presdenti Obamaan hogganttota Afrikaa ittin marihachiisu kana irraa Hogganaan Zimbaabwe Robert Mogaaben maricha bakka bu’onni Afrikaa fi hogganaa Amrekaa waliin raawwatuf jiraatan kanarraa kan qoda hin fudhanne tahuun bekkame jira.
Egumsa Obamaaf qillenssi biyya kenya Lafaa fi Samiin guyyota Obamaan daawwannaaf achitti argaman kana hunda kan dhunffaa Amrekaa jala jiru tahuun bekkame jira.
Previous Obama Lands in Ethiopia After Kenya Trip CNN & Aljezera
Next Biyyoota Arabaa addaan qoqqooduuf karoorri 1982 kaayame hujiirra oolaa jiraachuu isaa Burqaan Oduu Addunyaa Montikaarlo ibsee jira.